Polisy Roa Namoy Ny Ainy Noho Ny Tsy Fandraisana Andraikitry Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2014 20:27 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, македонски, English
Fampitandremana avy amin'ireo mpikomy Islamista fa nametraka baomba izy ireo. Sary: ashraf1974108 (Twitter)
Taorian'ny fipoahana roa teo akaikin'ny lapam-panjakana izay nahafatesana polisy roa sy maro hafa naratra tamin'ny 30 Jiona, tezitra tamin'ny minisiteran'ny atitany Ejypsiana ireo mpiserasera Twitter marobe noho ny tsy fahombiazany nandray fepetra na dia efa nisy aza ny fampitandremana nalefan'ireo vondrona mpikomy Ajnad Misr tamin'ny aterineto ora maromaro mialoha ny fipoahana.
Araka ny filazan'ny mpiserasera, mety ho voasoroka ihany ireo fipoahana tao amin'ny distrikan'i Héliopolis, tanàna ao Kairo renivohitra, raha tena niady tamin'ny fampihorohorona ny polisy fa tsy nifantoka tamin'ny fisamborana sy ny fampidirana am-ponja ny mpikatroka.
Vondrona mpikomy Islamista vaovao monina ao Kairo ny AJNÁD Misr (Miaramilan'i Ejypta) izay mikendry ilay antsoin'izy ireo hoe «singa mpamono olona» ao amin'ny governemanta Ejypsiana.
Nitàna ny sain'ny maro ny vondrona tamin'ny fiandohan'ity taona ity raha nilaza tamin'ny alalan'ny fanambarana antserasera izy ireo fa hanafika ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny Janoary. Tamin'ny volana Aprily, nilaza ny vondrona fa izy no tompon'andraikitra tamin'ny fipoahana tao amin'ny Oniversiten'i Kairo izay nahafaty ny lehiben'ny polisy sy olona dimy hafa. Araka ny tatitra avy amin'ny Al Arabiya, taorian'ny fanafihana tao amin'ny Oniversite tamin'ny Avrily, nandefa lahatsoratra tao amin'ny pejy Facebook'ny izy ireo hoe: “Efa nahemotray ireo fanafihana maro satria mety hipaka any amin'ireo olo-tsotra ny pitika baomba.” Mampiasa Twitter ihany koa ny vondrona.
Tamin'ny fanafihana farany nataon'ny Ajnad Misr tao Kairo, namono polisy manampahefana iray ny fipoahana voalohany ary nandratra telo hafa. Ny faharoa izay baomba vita tanana kosa nipoaka raha niezaka nikitika hanakana azy tsy hipoaka ny polisy, izay namono ilay polisy manampahefana faharoa.
Mpisera Twitter monina ao Eoropa, Ashraf Fawzi nilaza [ar] hoe:
دول كاتبينها بلون مختلف يا بهايم #محطة_الانفجار_السري #الاتحادية pic.twitter.com/CPkOYT5QeP
Nanoratra tamin'ny loko samihafa mihitsy aza izy ireo, adala ianareo
Mpikatroka sady bilaogera Ejypsiana Ahmed Al Ish, izay manana mpanjohy 77 000 na 77 K nanampy hoe:
Nilaza ny fanambaran'ny minisitera fa nahazo vaovao mikasika ny fisian'ny baomba izy ireo androany! Midika izany fa niantso azy ireo tamin'ny finday ireo mpampihorohoro rehefa diso fanantenana izy ireo fa tsy noraharahiana ny fampitandreman'izy ireo tamin'ny aterineto.
Ahmed Anwar, izay manana mpanaraka Twitter maherin'ny 14,5 K ary mitantana fantsona YouTube malaza efa nahazo mpijery maherin'ny 2 tapitrisa namazivazy hoe:
Inona koa no mbola azon'ireo mpampihorohoro atao?
Namoaka fanambarana izy ireo
Nolazain'izy ireo ny toerana nametrahany baomba
Inona koa no mbola azon'izy ireo atao? Mandehana ary makà sarin'ny tenanai miaraka miaraka amin'ny baomba?
Bilaogera mpanoro hevitra manokana sy momba ny lamaody, Rasha nanontany hoe:
Karazana manam-pahaizana momba ny baomba manao ahoana ireo manapoaka tena isaky ny miezaka manapoaka sy mandefa baomba? Taiza izy ireo no nampiofanina? Karazana fahoriana tahaka ny ahoana no iainantsika?
Nandritra izany, mpikatroka malaza, Nawara Negm izay manana mpanjohy maherin'ny 683 K namaly hoe [ar]:
Tianao hanaramaso ny aterineto, hanaisotra ireo mpikatroka noho ny heloka, manarama mpanoratra gazety, hisambotra olona tsy manan-tsiny sy hanakana fipoahana ve izy?
Bilaogera Ejypsiana Tamer Mowafy izay manasokajy ny tenany ho Sosialista Libertariana, izay manana mpanaraka 139 K ao amin'ny Twitter nizara hevitra mitovy amin'izany ihany koa:
Eny, ny namantsika ihany no mety hampidi-doza hoan'ny fiarovam-pirenentsika ary tokony hampidirina am-ponja …
Menna Alaa monina ao Jeddah sy Kairo izay manana mpanjohy 59K ao amin'ny Twitter ary manasokajy ny tenany ho “mpaneso te-ho mpanoratra gazety” namehy hoe:
Tsy mila manantena ity toerana ity, mila fahagagana. #MENA
Nifanindry tamin'ny tsingerintaona voalohan'ny fihetsiketsehana goavambe izay nitarika ny fihonganan'ny filoha Muhammed Morsi, kandidàn'ny Mpirahalahy Miozolomana izay nitondra nandritra ny herintaona taorian'ny fihonganan'ny filoha Hosni Moubarak ny fanafihana. Polisy an-jatony no nokendren'ireo mpikomy Islamista hatramin'ny fihonganan'i Morsi tamin'ny 3 Jolay. Ankoatra ireo Ejipsiana maherin'ny 16 000 namoy ny ainy nanomboka tamin'ny famoretana nataon'ny miaramila tamin'ireo mpirahalahy Miozolomana.